Zụta USB Na-akwụ ụgwọ Na-akwụ ụgwọ Nano Ihu Steamer - Mbupu Na-akwụ ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
USB Reistable moisturizing Nano Ihu Steamer
$ 11.99 Ịgachi price $ 22.99
Agba acha ọcha pink ìhè pink acha anụnụ anụnụ nwa
acha ọcha pink ìhè pink acha anụnụ anụnụ nwa
USB Reistable moisturizing Nano Ihu Steamer - ọcha na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Ngwaahịa Ogo Asambodo: PSB
:Dị: amdị Steam
Isi Iyi: Batrị na-akwụ ụgwọ
Number Model: O58673
Mmiri mmiri: Ihe dị ka 30ml
Enwere ike itinye mmanya na-aba n'anya
Mmiri a na-agba mmiri nano nwere nnukwu tank mmiri nwere ike banye n'ime ime anụ ahụ ma gbanye akpụkpọ ahụ.
Atomized ahụ bụ ihe siri ike na mfe amịkọrọ buttocks.
Ọ nwere ike iru mmiri na-enweghị smudging etemeete.
Biko jiri mmiri okike eweputara ma etinyekwala mmiri di ocha, mmiri di ocha, wdg.Ọ bụrụ na njupụta ogo mmiri dị oke elu ma ọ bụ pere mpe, ọ ga - eme ka onye na - agba mmiri ghara ịkpụ ma ọ bụ mechie ọnụ.
Akwadoro ka ị gbakwunye mmiri ịnweta mmiri.
A naghị atụ aro ka ị jiri mmiri dị ọcha, nke ga-eme ka ụmụ irighiri mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri na-agba mmiri.
A naghị atụ aro ka ị jiri mmiri mmiri. Mmiri mmiri nwere ọtụtụ adịghị ọcha, nke ga-egbochi ọdụ ụgbọ mmiri ịgba.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye mmiri ara ehi na mmiri mmiri ndị ọzọ, biko tinye mmiri iji mee dilution dịka ọnụọgụ 1:10.
Mgbe ịtinye mmiri ịnweta, jiri nwayọ maa jijiji.
1 * Ihu Igwe ihu
1 * USB USB
Ezigbo ngwa ngwa mbupu
Nice aka jidere igirigi.
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 73158.